Maazị Okorie kwuru nke a banyere nhọpụta izugbe ahụ a ga-eme n'ala anyị n'ahọ 2019, bụkwa nke o kwuru na onyeisi ala Buharị ekpebiela na ọ ga-eso wee zọọ, na-agbenyeghị na o nweghị ezi ihe ọbụla a hụrụ anya na nke ọ chịrị achị, na-abụghị naanị nsogbu na ọgba aghara juputara elu na ala.
O kwuru na otu ndọrọ ndọrọ ya bụ UPP ga-enye nkwado nyegara ihe ọbụla ọ ga-ewe iji hụ na a napụtara ala anyị n'aka ọchịchị ọjọọ nke Buharị na otu APC, ma sịkwa na ha ga-eme ihe ọbụla ọ ga-ewe iji hụ na ndị ọjọọ a enweghị ọnọdụ ọzọ n'ọchịchị ala Naịjiria ma ya fọdụzie ichighata azụ n'ọkwa ọchịchị.
Ya bụ onye jibụrụ aha otu UPP ahụ wee zọ ọkwa onyeisi ala n'ahọ 2015 mere ka a mara na dịka o siri dị na nkwekọrịta ndị otu ahụ mere na nnukwu ọgbakọ ha nwere na steeti Anambra n'abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa Juunu ahọ 2017; na ọ bụ onye sitere mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ahụ wee zọọ ọkwa onyeisi ala na nhọpụta ahụ na-akpụdobe nso. Ọ sịkwa na otu ahụ dịkwa njikere ịnabata mmekọrịta na ijikọ aka ọnụ nke otu ndọrọ ndọrọ ọbụla nwere ezi ebumịobi banyere ala anyị, dịka o siri dị n'ihe otu ndọrọ ndọrọ na-agbaso na achụm nta nkwado ha.
Banyere okwu ahụ aka na-achị steeti Kaduna bụ gọvanọ Nasir El-Rufai kwuru nso nso a maka Buharị na ntozuokè ya n'ịzọ ọkwa ya nke ugboro abụọ ahụ; maazị Okorie kwuru na ya bụ nwoke nwere ikike ikwu ihe ọbụla masịrị ya ma ọ bụ nyụlaa nsị elu otu o siri masị ya, maka na onye ọbụla na-eme ihe dịka uche ya hà.
O kwukwara hoohaa na ya achọghị ịma ma ọ bụ Buharị ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ APC ahụ wee zọọ ya bụ ọkwa, ma ọ bụ onye ọzọ, ma kọwaa hoohaa n'ebe o doro anya na ala Naịjiria ga-anwụ ma nwụọ pịị ma ọ bụrụ na otu ndọrọ ndọrọ APC chịkwuo ya ahọ anọ ọzọ.